L3 Chinja Vagadziri & Vatengesi - China L3 Chinja Fekitori
S5750E-26X-SI L2 Dual Stack 40G Yakangwara Fiber Chinja
S5750E-26X-SI chinja chizvarwa chitsva chehungwaru kuunganidzwa uye switch switch dzakagadzirwa neDCN yeanotakura uye MAN network. S5750E-26X-SI inopa 24 10GbE (SFP +) uye 2 40GbE (QSFP) zviteshi zvemuviri nemagetsi asingagadzirisike, yakagadzirirwa 10G kuwana mamiriro uye huwandu hwenzvimbo 10G kusangana mamiriro ane telecom giredhi dhizaini maficha ekuvimbika kukuru, uye redundancy. Makiyi Akakosha uye akasarudzika Performance uye Scalability Iyo gumi Gigabit Ethernet kuunganidzwa kweS5750E-26X-SI ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Kutenderera Fibhi Chinja
DCN S5750E akateedzana switch inozara yakazara fiber inokwenenzverwa switching switch ine yakagadziriswa, yakavakirwa-mukati 10GbE uplink chiteshi. Aya ma switch akachengetedzwa zvizere anopa kuwanikwa kukuru, kusagadzikana, chengetedzo, kushanda nesimba, uye mashandiro ari nyore ane hupfumi hweL3 maficha. Iyo yakanakira kuunganidzwa kana mukana wekuwana wecampus, bhizinesi, hurumende uye netiweki webasa. Makiyi Akakosha uye Zvakasarudzika Performance uye Scalability Iine yakakwira switching chinzvimbo, S5750E (R2) akateedzana rutsigiro waya-kumhanya L2 / L3 kumberi ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Kugadzira Mhangura Chinja
DCN S5750E akateedzana maswitch ndeye bhizinesi-kirasi inokwenenzverwa nzira dzekushandura dzakagadziriswa, dzakavakirwa-mukati 10GbE uplink zviteshi. Aya ma switch akachengetedzwa zvizere anopa kuwanikwa kukuru, kusagadzikana, chengetedzo, kushanda nesimba, uye mashandiro ari nyore ane hupfumi hweL3 maficha. Iyo yakanakira kuunganidzwa kana mukana wekuwana wecampus, bhizinesi, hurumende uye netiweki webasa. Makiyi Akakosha uye Zvakasarudzika Performance uye Scalability Iine yakakwira switching chinzvimbo, S5750E (R2) akateedzana rutsigiro waya-kumhanya L2 / L3 ...